“SAWIRRO”Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeybgalay xaflad uu xilka kula wareegayay R.wasaare Cumar C.rashiid – Radio Muqdisho
Munaasibaddan oo ka dhacay Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Somalia, ayaa waxaa xilka kula wareegay Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid, isago kala wareegay Ra’iisul wasaarihii hore ee Somalia, waxaana ka qeyb-galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somalia, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sii hayeyaasha xilalka Wasiirrada.
Munaasibadda horraanteeda, ayaa agaasime ku xigeenka xafiiska Ra’iisul wasaaraha waxa uu ku soo dhoweeyey dhammaan madaxda ka soo
Munaasibadda horraanteeda, ayaa agaasime ku xigeenka xafiiska Ra’iisul wasaaraha waxa uu ku soo dhoweeyey dhammaan madaxda ka soo qeyb-gashay, isagoo uga mahadceliyey guddigii soo diyaariyey munaasibadda Xil wareejinta.
Sii hayaha Wasiirka Hidaha iyo Tacliinta sarre Mudane Ducaale Aadam Maxamed oo ku hadlayey dhammaan magaca xubnaha golaha wasiirrada xilalka sii hayaha, ayaa si kooban u guud maray arrimhii ay ku guuleysatay Xukuumadda Ra’iisul wasaarihii hore Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed, isagoo u kala qaaday Siyaasadda, ammaanka, Federaalka, guddiga dib u eegista Destuurka iyo Hiigsiga cusub ee 2016-ka.
Ra’iisul wasaarihi hore ee Jamhuuriyadda Somalia, mudane Cabdiweli Sheekh Axmed oo isaga xilka wareejinayey ayaa khubad uu jeediyey si niyad furnaan ah ugu mahaceliyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka dhammaan golohii wasiirradii uu hoggaaminayey iyo shacabka Soomaaliyeed, isagoo ka dalbaday in la is cafiyo isla markaana loo wada istaago midnimada iyo horu-socodka Somalia.
Ra’iisul wasaaraha xafiiska la wareegay Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa sidoo kale isagana ku ammaanay Xukuumaddii uu horkacay Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed, in ay dalka u horseedday guulo la taaban karo, hasa yeeshee u ka amba qaadi doono halkaasi si loogu guuleysto hiigsiga cusub ee 2016-ka ee Somalia.
Inta uusan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo gabagabeyn munaasibadda ayaa waxaa si rasmi ah Feylasha shaqo ee Xukuumadda loogu wareejiyey Ra’iisul wasaaraha cusub Cumar C/rashiid, iyadoo ay wada saxiixeen nuqullada laba Feyl oo ka mid ah dhammaan Documents-ka Xukuumaddii hore, waxaana goob-jooge ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud,
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somalia, ayaa soo gabagabeeyey munaasibadda uu xilka kula wareegay Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda, madaxweynuhu waxa uu ku ammaanay Ra’iisul wasaarihii hore wada shaqeyntii dhexmartay mudada uu xafiiska joogay, sidoo kale golihii wasiirradiisa ayuu ku boggaadiyey howsha ay Qaranka u qabteen kulana dardaarmay in ay ka qeyb-qaataan sidii ay Somalia u gaari lahayd isku filnaansho.
Munaasibadda ayaana ku soo dhammatay jawi farxad oo is cafis ah, iyadoo Ra’iisul wasaaraha cusub ay golihii wasiirradii hore ay u ballan qaadeen in ay ku gacan siin doonaan howshiisa, isagana waxa uu xusay in uu si dhow ula tashan doonno si uu u soo dhiso Xukuumad awood u leh in dalka ay gaarsiiso qorshaha Somalia u degan ee ku wajahan sanadka 2016-ka.
“SAWIRRO”Gudoomiyaha Barlamaanka oo sheegay in Baarlamaanku dadaal u geli doono xuquuqda agoonta Soomaaliyeed
"SAWIRRO"Gudoomiyaha Barlamaanka oo sheegay in Baarlamaanku dadaal u geli doono xuquuqda agoonta Soomaaliyeed